Siyakwamukela website yethu
Ngakho Kungani OuBo Chemical
Akhethekile & ngokuyikho
Thina ezikhethekile yokukhiqiza Polyacrylamide iminyaka 8 izinga esiphakeme futhi amanani abiza. Ithimba lethu ujoyine pre-yokuthengisa, yokuthengisa nangemva-yokuthengisa inqubo ukusekela nawe ukukhethwa, ukuhlolwa umkhiqizo futhi emva-sales service. Siyathembisa: professional ithimba ukukusiza wenze ukukhetha okufanele.
Ithimba lethu ujoyine pre-yokuthengisa, yokuthengisa nangemva-yokuthengisa inqubo ukusekela nawe ukukhethwa, ukuhlolwa umkhiqizo futhi emva-sales service. Siyathembisa: professional ithimba ukukusiza wenze ukukhetha okufanele.
Umthelela Wesisindo Semolekyuli ku-Polyacry...
Ukwelashwa kwamanzi angcolile ezimbonini, okucacile...
I-Cationic polyacrylamide yodaka lwe-sludge ...
I-Cationic polyacrylamide yosawoti omningi yayi...